Buell X1 Lightning vs Ducati Monster 900 (2000) | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9806)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7477)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7472)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6445)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (6002)
နေအိမ် → Buell → Buell X1 Lightning vs Ducati Monster 900 (2000)
4 မေ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Buell X1 Lightning vs Ducati Monster 900 (2000)
အဆိုပါ Buell X1 lightning costs $18,550 whilst the Ducati Monster goes for $15,300. Both have Fuel Injection allowing immediate throttle response and ample power. They are both extremely comfortable for both rider and pillion, offeringavery stable and smooth ride. The Buell, with it’s larger 1200cc engine has more vibration built in that upon start-up sometimes makes you wonder if it’s going to collapse apart around you.
Buell XB12STT Super TT – ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်း
Top 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, R...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Top 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, reviews, သတင်း, Price…
17.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Buell Ulysses XB12XT – Review performance picture comparison news
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် RSRacecraft To Race EBR 1190RS In 2013 AMA Pro Superbike Championship
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Anthem by Erik Buell and the Thunderbolts Thunder Press
16.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Buell’s bolt of lightning – Buell Xb12 Bike Reviews Bike Expert
15.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2007 Buell Lightning CityX XB9SX – Translucent Bodywork (11 Jul 2006 – Buell)
15.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Buell Blast –
15.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ Buell Firebolt XB12R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
ဆူဇူကီး AN 650 Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Diavel ဆူဇူကီး Colleda CO စမတ် eScooter Brammo Enertia Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati Desmosedici GP11 Bajaj Discover ဟွန်ဒါ DN-01 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Moto Guzzi 1000 Daytona Injection အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Ducati 60
ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & Do Everything!
အဆိုပါ 2009 Harley Davidson လမ်းမကြီးမှာဘုရငျ – Yahoo Voices – voices.yahoo.com